War deg deg ah: Qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay wadada isku xirta KM4 iyo garoonka Aadan cadde – idalenews.com
War deg deg ah: Qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay wadada isku xirta KM4 iyo garoonka Aadan cadde
Gaari la sheegay in laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ayaa goor dhow abaara 3:00 galabnimo ku qarxay agagaarka garaasha Xaaji Dool oo ku yaala wadada isku xirta garoonka Aadan cadde iyo Isgoyska Km4 ee magaalada Muqdisho.
Qaraxan oo ahaa mid aad u xoogan oo laga maqlayey meelo badan oo ka mid ah magaalada Muqdisho ayaa markii uu dhacay waxaa cirka isku shareeray uuro iyo qaac madow, iyadoo la maqlayo rasaas xoogan oo dhaceysa.
Wararka hordhaca ah ee ka soo baxaya ayaa sheegaya in Gaariga isqarxiyey oo uu waday nin naftii hure ah lagu dhuftay gaari kale oo ay wateen howlwadeeno ka tirsan heyadaha dowlada Turkiga oo halkaas marayey.
Ciidamo ka tirsan dowlada ayaa qaraxa ka dib buux dhaafiyey goobtaas waxaana soo baxaya warar sheegaya in labo ka mid ah shaqaalaha Turkiga ay ku dhinteen qaraxaas lagana soo saaray meydkooda gaarigooda oo gubtay inkastoo aan weli si rasmi ah loo xaqiijin sidoo kale dad shacab ah ayaa ku waxyeeloobay kuwasoo tiradooda aan la ogeyn.
Waxaa uu ku soo aadayaa qaraxan xili xaalada magaalada ay cakiran tahay ka dib markii duhurnnimadii maanta ay dagaalo ka bilowdeen xarunta maxkamada gobolka banaadir halkaasoo ay qabsadeen kooxo hubeysan oo adeegsanaya qaraxyo iyo rasaas, iyadoo jawiga Muqdisho uu maanta ka bedelaan yahay sidii hore.
La socvo wixii soo kordha.
Masuuliyiin laga soo saaray xarunta maxkamada gobolka Banaadir iyo xaalada goobtaas oo weli cakiran